५६औँ जन्मदिन मनाउँदै शाहरुख - लोकसंवाद
५६औँ जन्मदिन मनाउँदै शाहरुख
बलिउड स्टार शाहरुख खानको मंगलबार २ नोभेम्बरमा जन्मोत्सव परेको छ । मंगलबार शाहरुख ५६औँ वर्षमा प्रवेश गरेका छन् । बलिउडमा शाहरुखलाई ‘रोमान्स किङ’को ट्याग दिइएको छ ।
उनलाई सम्झाउने नै उनले निर्वाह गरेका विभिन्न रोमान्टिक क्यारेक्टरले हो । यसैले गर्दा उनले एक्सन जनराका निकै कम फिल्म गरेका छन् । यिनै शाहरुखले एक अवार्डमा आफूले पुलिस अफिसरको भूमिका कुनै फिल्ममा पनि निर्वाह नगरेको गुनासो गरेका थिए ।
उनले आफू पुलिसको भूमिकामा देखिने इच्छासमेत जाहेर गरेका थिए । उनी पछिल्लो समय 'पठान'मा स्पाइ एजेन्टको भूमिका भने निर्वाह गरिरहेका छन् । उनको निर्माण तथा अभिनय रहेको फिल्म 'जिरो' असफल भएपछि उनी नयाँ निर्देशक र कथा चयनमा सतर्क छन् ।
पठानपछि शाहरुख साउथ इन्डियन फिल्म निर्देशक एटलीको फिल्ममा काम गर्ने तयारीमा छन् । मार्सल र थेरी जस्ता फिल्म निर्देशन गरेर चर्चामा आएका एटलीको फिल्म कुनै रिमेक नभई ओरिजिनल कथामा हुने बताइएको छ । शाहरुख चाहन्छन्, फिल्म हेरेर दर्शकले पूर्ण रूपमा मनोरञ्जन लिऊन् । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यसको काम राेकिएकाे छ ।
यस्तै, शाहरुखले काम गर्न चाहेको अर्का निर्देशक हुन् राजकुमार हिरानी । केही समययता उनीहरूले विभिन्न स्क्रिप्टमा छलफल गरेको खबर आउने गरेको छ । यद्यपि, फिल्म गर्ने घोषणा भने भएको छैन । सन् २०१८ मा रिलिज भएको फिल्म ‘सन्जु’ पछि हिरानीले पनि फिल्म निर्देशन गरेका छैनन् ।
उनले आफ्नो साथी अभिजात जोशीसँग मिलेर स्क्रिप्टमा काम गरिरहेका छन् । यस टिममा जोडिएकी छन् कनिका ढिल्लोन । शाहरुख र रेड चिल्लीसँग धेरै प्रोजेक्टमा काम गरेकी कनिकाले हिरानी र अभिजातलाई स्क्रिप्ट तयार पार्न सघाएकी छन् ।
निर्देशक हिरानी पनि शाहरुखलाई सुहाउँदो कथा भएकोले काम गर्न तयार भएका छन् । अब हेरौँ, शाहरुखको करियरमा उनको भूमिका कस्तो हुन्छ ? कमेडी र सोसल ड्रामा निर्देशन गर्दै आएका हिरानीले यस पटक कस्तो कथालाई अगाडि ल्याउछन् ? बी-टाउनमा यो चर्चाको विषय बनेको छ ।